Qiso Dhab Ah, Covid-19,,Qalinkii Prof.Mohamed Ahmed Farah( Jaafaa) | Kaafi News
Qiso Dhab Ah, Covid-19,,Qalinkii Prof.Mohamed Ahmed Farah( Jaafaa)
Maxaa Faatixada loogu celcelinayaa rakcad kasta?Faataxada waxaa ku jira, ducada ah “Ilaahow jidka toosan nagu hanuuni ٱهۡدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلۡمُسۡتَقِيمَ”. Waxaa la akhriyaa 17 jeer ruux kasta oo Muslim ah.
Maalin kasta 24 ka saacadood, meel kasta oo dunida guud keeda ahna, salaadda waxaa ku tukada in ka badan hal Billion oo Mulsim ah. Dhamaan waxey Ilaahey weydiistaan “Ilaahow waddada toosan nagu hanuuni” oo waddada khaldan inaan qaadno naga badbaadi.!!!
Qiyaastii, waa 17 billion of jeer maalin kasta oo daqiiqad kasta la akhrinayo ducadaas!!.
Haddii ducadaas quluubta loo siidaayo oo dariiqa khaldan la iska ilaaliyo, ducadaasi maqbuula ayey noqeneysaa.
XANUUNADA, ABAARAHA IYO COLAADAHA, waa ciqaab ilaahay, Bal eega aayadda Qur’aanka oo sheegaysaa macnaha ah: “waxaan idinku imtixaameynaa CABSI IYO GAAJO… وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَىْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ Kitaabka Qur’aanka waxaa Ilaahey usoo dejiyay in aadamiga aan jidka noloshu ka khaldamin, wuxuuna na siinayaa tilmaamo iyo tusaalooyin lagu hago nolosha.
Waxaa intaas la jira, wuxuu Ilaahey inoo soo diray nabegeenii Muxammed [nnk] oo hadaladiisii, ficiladiisii leynooga dhigay tusaale aynu ku dayan karno raaceyno, oo ah sida jidka toosan loo qaadi lahaa.
Dadkeygu iyo shacabkeygu ma arkaan, adduunyadan waxa ka socda,ha ka feejignaadeen CORON…baa jira, nadaafaduna waa muhiim. XADIISKEENII XASUUSTA
دهاارة شدرو مينال في الإيمان